कुकुर मर्दा डिप्रेसनमा – Sneha Care
Plant Based Diet & Advocacy
Spay, Neuter, and Vaccination
Street Dog Rescue, Care & Rehabilitation
Working Animal Welfare Program
Captive Animal Welfare Program
Farm Animal Profile
कुकुर मर्दा डिप्रेसनमा
२०७६ कार्तिक ८ शुक्रबार
पाँच वर्षअघिसम्म स्नेहा श्रेष्ठ ‘एनिमल लभर’ थिइनन् । आफूआसपासमा कुकुर बसेको ठाउँ तातोपानीले सफा गर्थिन् । रेबिजलगायत रोग सर्ने त्रास उनमा थियो । उनका श्रीमान्लाई भने कुकुर एकदमै मन पथ्र्यो । स्थानीय जातका भन्दा विदेशी कुकुर पाल्ने सोख राख्थे, उनी । छिमेकीले पनि महँगो मूल्य पर्ने कुकुर पालेका थिए । श्रीमान्ले धेरै ढिपी गरेपछि एउटा कुकुर ल्याउन उनले अनुमति दिइन् । एउटाको साटो श्रीमान्ले महँगो मूल्य तिरेर दुईवटा कुकुर घरमा ल्याए । स्नेहाले तिनलाई राख्ने ठाउँ बनाइदिइन्, गाडी राख्ने ग्यारेजमा । ल्याएको १५ दिनमै एउटा कुकुर म-यो । सायद पर्याप्त स्याहार पुगेन ।
त्यतिवेला उनको मनमा आफ्नै कारणले कुकुर मरेको चस्का प-यो । पर्याप्त हेरचाह गर्न नसकेकामा उनलाई आत्मग्लानि भयो । त्यसपछि बाँकी रहेको अर्को कुकुरलाई घरभित्रै राख्न थालिन् । त्यसलाई मर्न दिनुहुँदैन भनेर ब्ल्यांकेट ओढाएर राखिन् । स्नेहा दिनभर अफिसमा व्यस्त रहन्थिन्, बिहान घरबाट निस्केपछि साँझ मात्र फर्किन्थिन् । कुकुर दिनभर घरमा एक्लै हुन्थ्यो । त्यसलाई साथीका रूपमा महँगो मूल्यकै अर्को कुकुर किनेर ल्याए, उनीहरूले ।
त्यतिवेलासम्म स्थानीय जातका कुकुरसँग उनलाई केही मतलब थिएन । घरमा पालेका दुईवटालाई भने पर्याप्त समय दिन थालिन् । दिसा, पिसाब सफा गरिदिने र बाहिर घुमाउन लैजाने गर्न थालिन् । बिहान ८ बजेसम्म ओछ्यान नछाड्ने उनी त्यसपछि ६ बजे नै उठ्न थालिन् । साँझ अफिसबाट फर्किंदा उनलाई लिन दुवै कुकुर गेटसम्म आउँथे । तर, छिमेकीले गुनासो गर्न थाले– तपाईं दिनभर घरमा नहुँदा कुकुर भुकेर साह्रै डिस्टर्ब गरे ।
अहिले स्नेहाज् केयरमा डेढ सय कुकुर, सातवटा सुँगुर र सडकमा छाडिएका गाईका २९ बाच्छा–बाच्छी छन् । यसबीचमा संस्थाले १० हजारभन्दा बढी जनावरको उद्धार गरिसकेको छ ।
छिमेकीको गुनासोलाई उनले गम्भीर रूपमा लिइनन् । तर, एक दिन अफिसबाट फर्किंदा दुईमध्ये एउटा कुकुर उनलाई लिन गेटसम्म आएन । उनको मनमा चिसो पस्यो । भित्र गएर हेर्दा रगत बान्ता गरेर रगतमै लतपतिएको अवस्थामा त्यसलाई भेटिन् । छिमेकीले विष खान दिएछन्, त्यसलाई । त्यो कुकुर मरेको तोडमा उनी डिप्रेसनमै गइन् । आफ्नो कुकुरलाई कसैले विष दिएको बताउँदै उनी प्रहरीमा उजुरी लिएर गइन् । तर, प्रहरीले पनि हाँसोको पात्र बनाए, उनलाई ।
त्यसपछि उनको दिमागमा आयो, घरभित्रकै कुकुर त सुरक्षित छैनन् भने सडकमा भौँतारिइरहने कुकुरले बिस्कुटसम्म खान पाएका हुँदैनन् । उनी आफ्नो मरेको कुकुरलाई बिर्सन चाहन्थिन् । अनि सडकमा भौँतारिइरहने कुकुरहरूलाई बिस्कुट खुवाउन थालिन् । त्यो ‘प्यासन’ले उनलाई सडकका कुकुरको उद्धार गर्ने ‘डग लभर’ बनायो । आफ्नै गाडीमा राखेर सडकका कुकुरलाई ‘केनेल क्लब’मा पुर्‍याउन थालिन् । एउटा कुकुर स्थानीय ‘केनेल क्लब’मा पुर्‍याएबापत दुई सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो ।
त्यसक्रममा उनले देखिन्, कुनै कुकुरलाई एसिड खन्याइएको थियो, कुनैलाई धारिलो हतियारले काटिएको थियो भने कुनैको खुट्टा भाँचिएको थियो । एक महिनामै उनले करिब ५० वटा कुकुर केनेल क्लबमा पु-याइन् । त्यसपछि उनलाई लाग्यो, अरूमा पनि कुकुरप्रतिको माया जगाउनुपर्छ । सोही सोचको परिणाम थियो– स्नेहाज् केयर । चार वर्षअघि उनले साथीभाइको समूह बनाएर संस्था दर्ता गरिन् ।
अहिले स्नेहाज् केयरमा डेढ सय कुकुर, सातवटा सुँगुर र सडकमा छाडिएका गाईका २९ बाच्छा–बाच्छी छन् । यसबीचमा संस्थाले १० हजारभन्दा बढी जनावरको उद्धार गरिसकेको छ । सुरुका तीन महिना तिनको उपचार गरिन्छ । संस्थामा अहिले १७ वटा पक्षघातपीडित कुकुर उपचाररत छन् । ‘त्यसलाई विदेशीहरू ‘वेस्ट अफ टाइम एन्ड वेस्ट अफ मनी’ भन्छन्,’ स्नेहा भन्छिन्, ‘प्यारालाइसिस भएका कुकुरमा खर्च गर्नु साटो अरू १० वटा कुकुरलाई उद्धार गर्न सकिन्छ भन्छन् उनीहरू ।’ विकसित मुलुकमा त्यस्ता कुकुरलाई ‘इन्जेक्सन’ दिएर मार्ने गरिएको उनी बताउँछिन् । तर, उनले त्यस्ता कुकुरलाई मृत्यु होइन, जीवन दिइरहेकी छिन् ।
त्यसको अन्तर्य झनै पीडादायक छ । स्नेहाका बाबुलाई पनि पक्षघात भएको थियो । १७ वर्षसम्म पक्षघातसँग लडेर उनका बाबुले संसार छाडे । ‘उहाँलाई धेरै बाँच्न मन थियो, तर बचाउन सकेनौँ,’ उनी सम्झन्छिन् । स्कुले बालबालिकाले पकेट खर्च बचाएर संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि सहयोग गर्छन् । ५० रोपनी लिजमा लिएर उनले तरकारी खेती गरिरहेकी छिन् । त्यसमा संस्थामा पालिएका जनावरको मल प्रयोग हुन्छ । उत्पादित तरकारी बजारमा बिक्री गर्छिन् । त्यसबाट प्राप्त रकम तिनै जनावरको दानापानीमा खर्च गर्छिन् ।
Link to news : https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/27766/2019-10-25
Sneha’s Care Starts ‘Anti-Rabies Vaccination’ program in LMC
Training To Prepare Vegan Foods Begins
News Sneha’s Care Rescues The Last Dancing Bear of Nepal
Do You Have Question Call Us Or Visit Us.
© 2021 Sneha's Care. All rights reserved.
German Supporter - www.snehacare.de
Website Design and Developed By: Genesiswtechnology.com